२०७४ मङ्सिर १५ गते शुक्रवारको प्रतीक दैनिक
काङ्ग्रेस सरकार बन्यो भने मधेसको मुहार फेरिन्छ – प्रम देउवा
प्रस, वीरगंज, १४ मङ्सिर/ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो भने मधेसको मुहार फेरिने बताएका छन् । उनले सम्पूर्ण मधेसीको मनोभावना बुझ्ने पार्टी नेका नै भएको ठोकुवा गरे । वीरगंजमा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै नेकाको सभापतिसमेत रहेका देउवाले मधेसीको हक अधिकारको लागि नेका सदैव अग्रसर रहेको दाबी गरे । विपी उद्यानमा नेकाले आयोजना गरेको आमसभामा बोल्दै प्रम देउवाले यस्तो बताएका हुन् । मङ्सिर २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन प्रचारको लागि वीरगंज आएका प्रम देउवाले केही महिना पहिले मधेसीको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न नेका तयार रहेको अवस्थामा एमालेले रोकेको जिकिर गरे । यसबाट मधेसीको हक अधिकार सुनिश्चितता नेका मात्र गर्न सक्ने बताए । २००७ सालमा भएको जनक्रान्तिमा वीरगंजको महŒवपूर्ण भूमिका रहेकोले आगामी निर्वाचनमा पनि पर्सा जिल्लाको जनताको मतको खाँचो नेकालाई रहेको बताए । क्रान्तिको बिगुल फुक्दा वीरगंजका धेरै सपूत शहीद भए, २०४६–४७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि वीरगंजको भूमिका अग्रणी रहेको चर्चा गर्दै २०६२–६३ को राजा फाल्ने अभियानमा पनि वीरगंजले उत
रौतहट क्षेत्र नं. २ मा नेका, एमाले र फोरमबीच प्रतिस्पर्धा
प्रस, रौतहट, १४ मङ्सिर रौतहट जिल्लाका क्षेत्र नं २ मा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले तथा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालबीच प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना बढदै गएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार मोहम्मद आफताब आलम, नेकपा एमालेका उम्मेदवार मोहम्मद मुस्ताक आलम तथा फोरम उम्मेदवार किरण साहबीच प्रतिस्पर्धा हुने चर्चा छ । क्षेत्र नं २ मा २००७ सालदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको वर्चस्व कायम रहँदै आएको अवस्थामा संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसी जन अधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका उम्मेदवार मो मुस्ताक आलम विजयी भएका थिए । मजफा (लो)का अध्यक्ष विजय गच्छदारले नेपाली काङ्ग्रेससँग एकीकरण गरेपछि मो मुस्ताक आलम नेकपा एमालेमा प्रवेश गरी क्षेत्र न २ बाट निर्वाचन लडेका हुन् । नेका उम्मेदवार आलमकै कमी कमजोरीका कारण मुस्ताक आलम संविधानसभामा निर्वाचित भएका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका किरण साहले टिकट नपाएपछि सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालमा प्रवेश गरी चुनाव लडेका हुन् । सो क्षेत्रबाट नेपाली काङ्ग्रेसका मोहमद आफताम आलम, नेकपा एमालेका मो मुस्ताक आलम , सङ्घीय समाजवादी फोरमका उम्मेदवार किरण साह, राष्ट्रिय यर्थाथवादी पार्टीका भोला
राजमार्ग खाल्डाखुल्डी र धुलाम्मे, मतदाता सोध्छन्– कसले बनाउने ?
प्रस, परवानीपुर, १४ मङ्सिर/ पर्सा क्षेत्र नं १ अन्तर्गत त्रिभवन राजमार्ग वषैभरि खाल्डाखुल्डी र धुलाम्मे हुनुको कारण सोध्न अग्रसर भएका छन् पर्सेली मतदाता । वीरगंज–परवानीपुर–पथलैया सडकखण्ड नेपालकै लाइफलाइनको रूपमा लिइन्छ । भारतबाट सबैभन्दा छोटो दूरीवीरगंज भएर नेपाल भित्रिने सबै सवारी साधन तथा यात्रु यही सडक भएर पहाड चढ्छन् । तर पर्सा–बाराका नेताहरूको उदासीनताले राजमार्गको यो हविगत हुने गरेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । परवानीपुरका सञ्जय महतो कोइरी नेताहरूसँग प्रश्न गर्छन्–नेताजी १ आप्mनो जिल्लामा चिल्लो र सफा सडक बनाउने जिम्मेवारी कसको ? वीरगंज उपमहानगरपालिका हुँदा १९ वडा मात्रै थियो । आज महानगर भएर ३२ वडा भएको छ । वीरगंजदेखि राजमार्गपश्चिम सिमरासम्म एक नं क्षेत्र पर्छ भने बाराको क्षेत्र नं ४ यो राजमार्गको पूर्व अवस्थित छ । यहाका नेताहरू सडक र विकास भन्छन् तर मुख्य नाका राजमार्गको यो अवस्था छ, उनी आक्रोश व्यक्त गर्छन् । वीरगंज भन्सार भएर नेपाल प्रवेश गर्दा लाग्छ कुनै ‘धूलोपुर’मा प्रवेश गरिंदै छ । रजतजयन्ती चोक, वीरगंज बसपार्क, बह्मचोक, प्रतिमा चोक, गण्डक, परवानीपुर, हिमाल
प्रथम वीरगंज च्याम्पियनसिप क्रिकेटः युसिसी विजयी
प्रस, वीरगंज, १४ मङ्सिर/ नारायणी रङ्गशालामा जारी प्रथम वीरगंज च्याम्पियनसिप क्रिकेट कप अन्तर्गत बिहीवार सम्पन्न खेलमा युसिसी (पिंक) क्रिकेट क्लब विजयी भएको छ । टस जितेर पहिलो ब्याटिङ्ग रोजेको जलेश्वर टिमले निर्धारित ४० ओभरमा ८ विकेटको नोक्सानीमा १२७ रन बनाएको थियो । प्रतिउत्तरमा युसिसी क्रिकेट क्लबले २२.४ ओभरमा ४ विकेट गुमाएर १२८ रन बनाएर जित हासिल गरेको हो । प्रतियोगिताको म्यान अफ दि म्याच समशाद अन्सारी घोषित भएका थिए ।
के हो पूँजीवादको विशेषता ?
विश्वराज अधिकारी पूर्व वा दक्षिण एसियामा पूँजीवादको प्रचार गतल किसिमले भयो । त्यस्तो हुनु स्वाभाविक थियो पनि, किनभने सन् १९६० देखि १९८० सम्म एसियाका दुई ठूला राष्ट्र चीन र भारत दुवै पूँजीवादका विरोधी थिए । माओ त्सेतुड्ढो नेतृत्वमा सन् १९६६ देखि १९७६ सम्म चलेको सांस्कृतिक क्रान्तिले त धनी व्यवसायी वा पूँजीपतिहरूको सफाया अभियान नै चलाएको थियो । उता रूसले पनि भित्रीरूपमा कट्टरताका साथ साम्यवादको अभ्यास नगरे तापनि बाहिरीरूपमा भने पूँजीवादको घोर विरोध गर्न छाडेको थिएन । त्यसताका विकासको पथमा दौडिन खोजिरहेको एसियाको एक शक्तिसाली मुलुक जापानले पूँजीवादको प्रयोग दोस्रो विश्वयुद्धताका तहसनहस भएको आप्mनो अर्थ व्यवस्थाको सुधार गर्न गरे तापनि जापानले आप्mना वस्तुहरू एसियामा निर्यात गर्न मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको थियो, एसियामा पूँजीवादको प्रचार गर्न उसले पटक्कै ध्यान दिएको थिएन । यी विभिन्न कारणहरूले गर्दा एसियाका मुलुकहरूमा पूँजीवादको सकारात्मक प्रभाव पर्न सकेन । पूँजीवादको सकारात्मक प्रभाव पर्न नसकेको हुनाले जापानबाहेक एसियाका अन्य राष्ट्रहरू त्यसताका धनी हुन सकेनन् । पूँजीवादको प्रयोग गर
आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन नै आर्थिक समृद्धिको आधार
अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव कुनै पनि व्यक्ति वा मुलुकको आर्थिक विकासको निर्धारित मापदण्ड हुँदैन र आर्थिक विकासको लागि कुनै चमत्कारी वस्तु पनि छैन । आर्थिक विकासको एउटा मात्र उपयोगी एवं व्यावहारिक आधार भनेको आयआर्जन गर्नु र आयभन्दा कम खर्च गर्नु । जतिसुकै आय गरे पनि आयभन्दा बढी खर्च गर्नेले बचत गर्न सक्दैन । बचत गर्न नसके आर्थिकरूपले बलियो हुन सक्दैन । यो कुरा व्यक्तिमा मात्र होइन, मुलुकमा पनि लागू हुन्छ । व्यक्तिको हकमा बेफजुल खर्च रोक्नुपर्छ भने मुलुकको हकमा बेफजुल खर्च एवं भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ । कम्युनिस्ट सरकारहरू उत्पादनमा बढी जोड दिन्छन् भने खपतमा नियन्त्रण गर्छन् । खपतलाई व्यवस्थित गर्छन् । नेपालमा अडसठ्ठी प्रतिशत मत कम्युनिस्टहरूको रहँदै आएको अवस्थामा यहाँको आर्थिक विकास तीव्र गतिमा हुनुपर्ने हो । धनी र गरिबबीचको दूरी मेटिनुपर्ने, भ्रष्टाचार कम हुनु पर्ने, आय बढनुपर्ने, महँगी कम हुनुपर्ने थियो । तर दुर्भाग्य नै भनौं प्रजातन्त्र आएको सात दशक बित्न लाग्दा पनि यस्तो उपलब्धि प्राप्त भएको छैन । उपलब्धि प्राप्त हुने कुनै छाँटकाँट पनि देखिएको छैन । ०१५ सालमा संसदीय चुनावमा
यान्त्रिक युवती सोफिया
ई. गोपाल श्रेष्ठ यान्त्रिक युवती बोल्छिन्, सोधेको कुराको जवाफ दिन्छिन्, विवाह गर्ने परिवार बसाउने इच्छा व्यक्त गर्छिन् । सुन्दा, भिडियोमा देख्दा अचम्म लाग्छ । के यो वास्तविकता हो ? अनायास प्रश्न नै प्रश्न मनभरि उब्जिन्छ । झन् साउदी अरेबियाले गत अक्टोबरमा आप्mनो देशको नागरिकता नै प्रदान गरी इज्जत गरेको सुन्दा त अचम्म नै अचम्म लाग्छ । यी यान्त्रिक युवतीका सृष्टिकर्ता हुन् हड्ढड्ढा डेभिड हेनसन् । यान्त्रिक युवतीको शरीरमा क्यामरा जडान गरिएको छ । साथै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ए.आई., सप्mटवेयर पनि प्रोग्राम गरिएको छ जसको प्रयोगले उनले आई कन्टयाक गर्न सक्छिन् र मान्छे चिन्न सक्छिन् । सोफिया भन्छिन्– उनी र उनीजस्तै यान्त्रिक मानवहरूले जेष्ठ नागरिकहरूको प्रभावकारी ढङ्गले देखभाल गर्न सक्छन्, पार्क र बगैंचाहरूमा भिजिटरहरूको मार्गदर्शन गर्न सक्छन् र मानव जातिको जीवन अझै उत्कृष्ट बनाउन सहयोग गर्न सक्छन् । र अन्ततोगत्वा संसारलाई उत्कृटता प्रदान गर्न सक्छन् । मानवजाति सँग मिलेर बस्नु र मानवजातिलाई सहयोग गर्नु नै उनीहरूको चाहना हो । मानवलाई झर्को लाग्ने र दिक्क लाग्ने काम यान्त्रिक मानवले
शीतल महतो प्रजातन्त्र स्थापना भएको तीन दशक भइसक्दा पनि आर्थिक तथा भौतिक विकासको दृष्टिकोणले नेपाल अति पिछडिएको मुलुकको सूचीमा रहेको छ । आर्थिक विकास हुन नसक्दा मुलुकमा गरिबी, बरोजगार र असमानता झन् बढदो छ । गरिब, विपन्न र आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा पिछडिएको वर्ग एवं समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा ल्याई उनीहरूको राज्यको उत्पादनशील स्रोत साधनमाथि पहुँच, उपभोग र नियन्त्रणमा समानता र न्याय स्थापना नगरेसम्म मुलुकमा उच्चस्तरको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिंदैन । यसका लागि राजनीतिक स्थायित्य र सरकारको स्पष्ट आर्थिक दृष्टिकोण आवश्यक छ । न्यून आर्थिक वृद्धि, सङ्कुचित रोजगारका अवसर र राजनीतिक सङ्क्रमणका कारण आर्थिक सम्भावना पहिल्याउन नसकेर नेपालको अर्थतन्त्र जोखिममा परेको छ । भनिन्छ, आजको लगानी भोलिको समृद्धि । समृद्धिसम्म पुग्न लगानी पहिलो र अनिवार्य शर्त हो । लगानी उत्पादनको आधार पनि हो । लगानीले उत्पादनसँगै रोजगार सिर्जना गर्छ । रोजगार आयको बलियो र सशक्त आधार हो । यसरी लगानीले आय, उत्पादन र रोजगार सिर्जना गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा औद्योगिकमैत
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि एकसाता अवधि बाँकी छ । नेपालको संविधान–०७२ जारी भएपछि यसै वर्ष अर्थात् ०७४ माघ मसान्तसम्म तीनै चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रावधान थियो । स्थानीय निर्वाचन अनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गरी तीनै चरणको निर्वाचन गर्न संविधान जारी भएपछिको सृजित अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै आम नेपालीले तीन चरणको निर्वाचन सम्भव हुन नसक्ने अडकलबाजी गरिएको थियो । संविधान जारी गर्नका लागि पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको संसद्ले नसकेपछि संविधानसभाको निर्वाचन दोस्रोपटक गरिएको थियो । दोस्रोेचोटी बनेको संविधानसभाले तोकिएको मितिमा संविधान जारी ग¥यो । देशका तीन ठूला पार्टी संविधान जारी गर्ने विषयमा एकमत भएपछि दुई तिहाईभन्दा बढीको समर्थनमा संविधान जारी पनि भयो । तर संविधान जारी नहुन दिनका लागि बाह्य तथा आन्तरिक प्रयासहरू पनि नभएका होइनन् । संविधानमा आप्mनो हक–अधिकार सुनिश्चित नभएको भन्दै मधेसवादी दलहरूले विरोध शुरु गरे । मधेसवादी दलहरूको विरोधको बावजुद संविधान जारी भयो । जारी संविधानको मधेसमा तीव्र
२०७४ मङ्सिर १४ गते बिहीवारको प्रतीक दैनिक
बारा निर्वाचन क्षेत्र नं ४ को चुनावी दङ्गल
प्रस, जीतपुर, १३ मङ्सिर/ निर्वाचनको मिति जति–जति नजिकिंदैछ, बारामा त्यतित्यति चुनावी सरगर्मी बढन थालेको छ । निर्वाचनको दिन घटदै एघार दिनमा सीमित भएपछि उम्मेदवारले मतदातालाई आपूmतिर आकर्षित पार्न सबैभन्दा बढी घरदैलो अभियानमा जोड दिएको देखिन्छ । उम्मेदवारले मतदाताका घरघरमा पुगेर मत माग्ने चुनावी रणनीतिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । बारामा चार प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये क्षेत्र नं ४ मा पनि चुनावी रौनक बढदै गएको देखिन्छ । यस क्रममा मतदाताका आकाङ्क्षा र जिज्ञासालाई ध्यानपूर्वक ग्रहण गरी समस्या समाधान गर्ने विषयमा उम्मेदवारप्रतिबद्धता प्रकट गरिरहेका देखिन्छन् । साथै कार्यकर्ताको व्यापक परिचालन गरी मतदातालाई आकर्षित पार्न पFँचवर्षीय योजना र पार्टीको घोषणपत्रको विषयमा पनि जानकारी गराउने गरिएको देखिन्छ । यस क्षेत्रका मतदाताले बाटोघाटो, कृषिको आधुनिकीकरणका साथै सिंचाइको समुचित व्यवस्था, सुकुम्बासी समस्याको समाधानलगायत माग उम्मेदवार समक्ष राखेका छन् । प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं ४ मा नेपाली काङ्ग्रेसका लालबाबू सिंह र वाम गठबन्धनबाट नेकपा (एमाले) का देवनारायण चौधरीबीच प्रतिस
दलित अगुवाहरूको आरोप भोट माग्छन्, पानी पिउँदैनन्
प्रस, परवानीपुर, १३ मङ्सिर/ पछिल्लो समय पर्साका दलित तथा विपन्न परिवारहरू सङ्गठित हुन थालेका छन् । तराईमा सबभन्दा पछाडि परेका जाती डोम, दुसाद, मुसहर, मलाह, अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम धोबीलगायतका जातीहरू पर्सामा सङ्गठित हुन थालेका हुन् । शिक्षा र रोजागारीमा पछि परेका यस समुदायका व्यक्तिहरूलाई पर्साका नेताहरूले जहिले पनि आप्mनो भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको भर्खरै पर्सामा गठन भएको नेपाल दलित अल्पसङ्ख्यक कल्याण संस्था पर्साका अध्यक्ष धर्मराज कुमार पासवानले बताए । उनले हालको बढेको चुनावी सरगर्मीमा पनि सबै दलका उम्मेदवारहरू भोट माग्न घरदैलोमा आउने गरेको तर हक अधिकारको लागि कसैले ठोस प्रतिबद्धता आप्mनो घोषणा पत्र तथा संकल्प पत्रमा नल्याएको आरोप लगाए । उनले संविधानमा छुवाछुत, भेदभाव हटेको तर समाजमा आज पनि छुवाछुत विद्यमान रहेको बताए। पर्साको शहरदेखि ग्रामिण भेगमा डोम, चमार र विपन्न जातिसँग उच्च कथित जातीहरू एकै ठाउँमा खानपिन गर्ने अवस्था नरहेको यथार्थ छ । हाल नेताहरू घरमा त आउँछन् तर हामीले पानी र खानाको लागि सोध्दा भने ‘पर्दैन भनी अन्तै खान्छौ’ भन्छन् । उनीहरू बोतलमा पानी ल
राजनीतिक आलोचनाका उत्कर्ष दिनहरू
सञ्जय साह मित्र लोकतन्त्रमा आप्mनो अभिमत राख्ने छुट सबैलाई छ । यो लोकतन्त्रको मर्यादा नै हो कि आप्mनो कुरा जनतामा सबैले राख्न पाउँछन् । सबैले आप्mनो तर्क र विचार राखेर अर्काको विचारलाई सभ्य तरिकाले खण्डन गर्दा आप्mनो पनि सभ्यता झल्कन्छ । सभ्यता कुनै दलले सिकाउने होइन, तर दलको प्रतिनिधिको हैसियतमा उम्मेदवार बनेर जनतामा जाँदा ऊ जनताको प्रतिनिधि बन्न आएको देखिन्छ । वास्तवमा जनताको प्रतिनिधि बन्ने योग्यता ममा छ भनेर नै कोही उम्मेदवार बनेको हुन्छ । जनताबीच जाँदा दलको प्रतिनिधि र जनताबाट चुनिएपछि जनताको प्रतिनिधि हुने हो । यसरी दोहरो भूमिकामा रहने व्यक्तिको वाणी संयमित हुँदा जनताले पनि असल बन्ने प्रेरणा पाउँछ । लोकतन्त्रमा नेताहरू जनताका लागि आदर्श हुनुपर्छ । हुनत अहिलेका धेरै नेताहरू आदर्श हुन सकेका छैनन् । आदर्श नेतामा हुनुपर्ने अनुकरणात्मक गुणको अभाव देखिएको छ । कतिपय नेताहरू बाहिर व्यवहारमा र बोलीमा पनि निकै सफा हुन्छन् तर यथार्थमा भित्रीरूपमा भने त्यस्तो हुँदैनन् । बढी गफ हाँक्ने नेतालाई जनताले छिटै चिन्छ । जनताले चिनेपछि ऊप्रतिको आकर्षण कम हुँदै जान्छ र विकर्षणमा पनि बदलिन बे
यद्यपि कोशिश जारी छ
निर्वाचन नजिकिंदै गइरहेसँगै निर्वाचन बिथोल्ने तŒवको प्रयास पनि बढिरहेको देखिन्छ । यद्यपि तिनको प्रयासमा उपलब्धि छैन, सानो उपक्रमले नै मतदाता डराऊन् र निर्वाचन बिथोलियोस् भन्ने भाव लुकेको देखिन्छ । आपूmसँग शक्ति साधन नभएर हो वा राजनीतिमा केही न केही गरिरहनुपर्छ भन्ने भावनाले हो, पटाखा पडकाएर बमको ध्वांस दिइरहेका छन् । सबै ठाउँमा पटाखा नै पडकाइएको पनि होइन, कहींकहीं त शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ पनि पडकाइएको छ, मानिस घाइते पनि भएका छन् । चुनाव प्रचारमा हिंडेका उम्मेदवार–समर्थकलाई ताकेर पनि बम विस्फोट गराइएको छ, सभा–जुलुसमा पनि विस्फोट गराइएको छ, नेताहरूको घरूमा र बितेको पहिलो चरणको मतदान केन्द्रमा निर्वाचन बिथोल्ने प्रयासस्वरूप पटाखाहरू पडकाइएको थियो । नेकपा माओवादीका ‘विप्लव’को प्रभाव क्षेत्र भनेको पहाड हो, त्यहाँ माओवादीको लाख प्रयत्नका बावजुद ६५ प्रतिशत मतदान भयो भने तराईमा चुनाव बहिष्काको खास अर्थ रहन्छ जस्तो लाग्दैन । पर्साजस्तो जहिले पनि सत्तापक्ष्Fमा रहने जिल्लामा पनि काङ्ग्रेस उम्मेदवारको चुनाव प्रचार गाडीमा बम हानिएको छ । बमले गाडीमा सामान्य क्षति मात्र पु¥याएको छ । धनजनको
२०७४ मङ्सिर १३ गते बुधवारको प्रतीक दैनिक
प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरू मतदाताको घरदैलोमा
प्रस, वीरगंज, १२ मङ्सिर/ मङ्सिर २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि पर्सा, बारामा चुनावी अभियान सुचारु छ । राजनीतिक दलका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसारलाई तीव्रता दिंदै आएका छन् । यसैक्रममा वाम गठबन्धनले आज वीरगंजमा जनप्रदर्शन एवं सभा गरेको छ । भारतीय महावाणिज्य दूतावास वीरगंजसँग टाँसिएको विपि उद्यानमा आयोजित सभामा बोल्दै पर्सा क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार विचारी यादवले जनप्रदर्शनमा सहभागिता नै वाम गठबन्धनको जीतको सूचक भएको बताए । उनले एमाले र माओवादी केन्द्र मधेस र मधेसीको पक्ष्Fमा रहेको दाबी पनि गरे । अर्का क्षेत्र नं. २ बाट वाम गठबन्धनका प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार महम्मद सलीम मन्सुरले एक महिनाभित्र पूरै देश वाम गठबन्धनमय हुने बताए । उनले देशको प्रत्येक जिल्ला लालकिला बन्ने दाबी गरे । उम्मेदवार मन्सुरले काङ्ग्रेस र मधेसवादी भनाउँदा दलहरू जनताको नजरमा अवसरवादीको रूपमा प्रतिविम्बित भएको बताए । कार्यक्रममा प्रदेशसभा उम्मेदवार रामचन्द्र साह, शम्भु गुप्ता, रहबर अन्सारी, छोटेलाल कुर्मीलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । यस अघि
वकिलले अदालतबाटै मोबाइल चोरे
प्रस, वीरगंज, १२ मङ्सिर/ पर्सा जिल्ला अदालतको मुद्दा फाँटमा कार्यरत एकजना महिला कर्मचारीको कानुन व्यावसायीले मोबाइल चोरी गरेको पुष्टि भएको छ । अदालतमा करारमा कार्यरत डिठ्ठा (खरदार) मेघाकुमारीको मोबाइल हिजो दिउँसो चोरी भएकोमा अदालतमा जडित सिसी क्यामराबाट चोरको पत्तो लागेको हो । मुद्दा फाँटमा काममा व्यस्त भएको मौका छोपी खरदार मेघाको मोबाइल कानुन व्यवसायी नौशादले चोरी गरेका थिए । दिउँसो चोरी भएको मोबाइल खोजी गर्ने क्रममा अदालतका कर्मचारीले सिसी क्यामराको फुटेज हेरेपछि कानुन व्यावसायी नौशादले चोरी गरेको पुष्टि भएको थियो । अर्का एकजना कानुन व्यावसायीले बताए अनुसार अदालत बाहिर सिसीक्यामरा जडान रहेको सबैलाई अवगत भए पनि फाँटहरूमा पनि जडान गरिएकोबारे कर्मचारीबाहेक थोरैलाई मात्र थाहा थियो । हिजो मोबाइल चोरको खोजी गर्ने क्रममा फुटेज निकाल्न लागेपछि कानुन व्यवसायी नौशाद चोरी समातिने भयले टाप भएका थिए । आज उनले न्यायाधीशसँग माफी मागेर चोरीको मोबाइल फिर्ता गरेका छन् ।
पक्राउ परेका कुर्मी विप्लव समूहका होइनन्
प्रस, परवानीपुर, १२ मङ्सिर/ चुनावलाई भयरहित बनाउन तथा आपराधिक घटना हुन नदिन सुरक्षा निकाय गम्भीर देखिएको छ । यसै क्रममा विभिन्न जिल्लाबाट विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता तथा भूमिगत समूहका मानिसलाई पक्राउ गर्न थालेको छ । पर्सा प्रहरीले पूर्व सभासद् इस्लाम हवारी, बिगा साह र अकलु यादवलाई पक्राउ गरेको छ । तर अकलु माओवादी केन्द्रसँग संलग्न कार्यकर्ता हुन् भनेर परिवारजनले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । पर्सा प्रहरीले आजै नेकपाका कार्यकर्ता नभएका अर्का एकजनालाई पक्राउ गरेको छ । वैद्य समूहका नेता वीरगंज–२१ पटेलनगरका छोटेलाल कुर्मीलाई आज साँझ परवानीपुर बजारबाट पक्राउ गरेको परिवारजनले जनाएका छन् । छोरीको दोङाको लागि बजारमा सामान किनिरहेको अवस्थमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको परिवारजनले बताए । उनी नेकपामा संलग्न नरहेकाले अविलम्ब रिहा गर्न माग गरिएको छ । पर्सा प्रहरीका प्रवक्ता प्रकाश सापकोटाले भने आपूm बाहिर रहेकोले को–को पक्राउ परेको हुन् बुझेर जानकारी गराउने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
चौरसियाको गाडीमा बम प्रहार, एमाले कार्यालयको बम निष्क्रिय
प्रस, परवानीपुर, १२ मङ्सिर/ अज्ञात समूहले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अजय चौरसियाको गाडीमा बम प्रहार गरेको छ । गएराति बहुदरमाई नगरपालिकाको बर्वा गाउँमा चुनावी प्रचारप्रसारमा पुगेका चौरसियाको गाडीमा बम प्रहार भएको हो । क्षेत्र नं २ का प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार चौरसियको ना. ३च ३४९८ नं को गाडीमा बम प्रहार गरिएको हो । बम प्रहारबाट गाडीको अगाडिको एउटा चक्कामा सामान्य क्षति पुगेको उनले बताए । चुनावीसभा रोक्न र त्रास फैलाउन यस्तो घटना घटाइएको तर आपूm यी सबबाट त्रसित नहुने चौरसियाले प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसैगरी हिजै राति एमाले पर्साको कार्यालयको बरन्डामा राखिएको बम सेनाको टोलीले निष्क्रिय पारेको छ । प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेको एमाले पर्साको कार्यालयमा प्रहरी डियुटी परिवर्तन गर्ने क्रममा बाहिरिएको मौका छोपी कसैले बरन्डामा बम राखेको थियो । कालो प्लास्टिकको झोलामा राखिएको बमलाई सेनाको टोलीले निष्क्रिय पारेको थियो ।
मल अभाव ः कृषि सहकारीद्वारा चर्को मूल्यमा बिक्री
प्रमोद यादव, रङ्गपुर, पर्सा, १२ मङ्सिर/ पर्साको ग्रामीण क्ष्Fेत्रमा रहेका कृषि सहकारी संस्थाहरूले किसानहरूलाई बढी मूल्यमा रासायनिक मलखाद बेच्ने गरेको समाचार प्राप्त भएको छ । कृषि सामग्री संस्थानले कृषि सहकारी संस्थालाई मात्र मलखाद उपलब्ध गराउने गरेकोमा किसानहरूले डिलरमार्पmत् किन्दा मलखादको मूल्य बढी तिर्नुपरेको कृषक धु्रव यादवले बताए । कृषि सहकारी संस्थाले डिएपी रु ४३ सय, युरिया रु १४ सय, पोटास रु ३२ सय प्रतिक्विन्टल लिनुपर्नेमा डिलरले प्रतिक्विन्टलमा रु ५ देखि ६ सयसम्म बढी लिने गरेको लखनपुरका किसान सोनालाल सहनीले गुनासो गरे । यसबारे डिलरका व्यापारीहरूले कृषि सामग्री संस्थानले मागभन्दा आधा मात्र मलखाद उपलब्ध गराएको तथा भाडा र मजदुर खर्च बढी लाग्ने हुँदा तोकिएको दररेटभन्दा बढी बेच्नुपरेको बताए । कृषकको आवश्यकता अनुसार संस्थाले खाद उपलब्ध नगराएको महुवनका खाद व्यापारीले बताए । यस विषयमा जिल्ला कृषि सामग्री संस्थाका सहायक प्रमुख गोरख केसीले गुनासो आएकोले खोजबिन गर्ने बताए । आवश्यकता अनुसार मलखाद नपाउने र पाए पनि महँगो मूल्य पर्ने भएकोले किसानहरू भारतको सीमावर्ती ब
बदलिंदो क्षेत्रीय राजनीति र नेपाल
विनोद गुप्ता नेपालको वर्तमान चुनाव र भारत एवं चीनबीचको राजनैतिक उतारचढावले ‘समाजवाद’ शब्दलाई फेरि एकपटक बुझ्नुपर्ने बनाएको छ । चुनावको पूर्वसन्ध्यामा एक्कासि नेपालमा माओवादी र एमालेको वाम एकता स्थायित्व र विकासको नाममा हुनासाथ नेपाली काङ्ग्रेसले पनि स्थायित्व र विकासको लागि गठबन्धनको निर्माण शुरु गरेकै हो । पूर्व प्रम एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले हालसालै लोकतन्त्रको प्रमाणपत्र लिन सानेपा जानुपर्दैन भन्ने अभिव्यक्तिबाटै वाम गठबन्धनको आगामी दिनको कार्यदिशा बुझ्न सकिन्छ । चीनले वस्तुतः रणनैतिकरूपमा आपूmलाई विश्वशक्तिको रूपमा स्थापित गर्न सर्वप्रथम त कूटनैतिक रूपमा भारतलाई घेरा हाल्ने प्रयास शुरु गरेको हो, जसमा श्रीलङ्कामा सैनिक अड्डाको स्थापना, पाकिस्तानसँगको सुमधुर सम्बन्धलाई झन् सुमधुर बनाउन आर्थिक करीडोरको निर्माण र बङ्गलादेशमा समेत भारतविरोधी आवाज हिन्दू विरोधी स्वरकै रूपमा भए पनि उठ्न शुरु भइसकेको छ । अब बाँकीमा भूटान र नेपाल मात्र पर्ने भएकोमा डोकलाम विवादमा कूटनैतिक पराजय बेहार्नुपरेकोले नेपालबाहेक ऊसँग अन्य विकल्प नै थिएन । चीनले सानो समयमा उल्लेख्य प्रगति गरेको तथ्यलाई नकार्न सक
सङ्क्रमणकालमा अवाञ्छित तŒवहरू मौलाउँछन् । यो सत्य कुनै पनि प्राणीमाथि लागू हुन्छ । देशमा अस्थिरता रहेको बेला, चोर, डाँका, फटाहा, तस्कर, अपराधी इत्यादिको बिगबिगी चल्छ । राज्यको साटो सामान्य मानिसले असामाजिक तŒवबाट सुरक्षा खोज्न थाल्छ । त्यसैगरी अहिले मौसमको सङ्क्रमणकाल चालिरहेको छ । गर्मी हराउँदो र जाडो बढने क्रममा छ । यस सङ्क्रमणको बेला लामखुट्टेहरूको बिगबिगी असह्य बनेको छ । लामखुट्टेको बिगबिगी हुनुको अर्थ हो, लामखुट्टेजन्य रोगहरूको प्रसार हुनु । मलेरिया, डेंगुलगायत लामखुट्टेजन्य रोगबाट सङ्क्रमित मानिसहरूको सङ्ख्या बढिरहेको र कति त मृत्युको मुखमा पनि परेका समाचारहरू सञ्चारमाध्यममा बाक्लै आइरहेका छन् । मौसम मात्र अहिले सङ्क्रमणशील छैन, निर्वाचनको बेला भएकोले स्थानीय तह, जसको दायित्वभित्र सरसफाइ, जसको अभावमा लामखुट्टेको पैदावार बढछ सङ्क्रमणपूर्ण अवस्थामा देखिएको छ । भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको हुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू जुन राजनीतिक दलको आशीर्वाद पाएर जितेका छन्, पालोको पैंचो तिर्न, तिनका प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई जिताउन कम्मर कसेर लागेका छन् । अनि स्थानीय तहको
प्रहरीले प्रचारसामग्री हटाउन शुरु ग¥यो
प्रस, वीरगंज, ११ मङ्सिर/ निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत वीरगंजको मुख्य सडकको सार्वजनिक डिभाइडर, विद्युत्, टेलिफोन पोल, सालिक, घण्टाघर तथा सरकारी कार्यालयहरूमा झुन्डयाइएका प्रचार सामग्री प्रहरीले आज हटाएको छ । वीरगंज, घण्टाघरदेखि पावरहाउस चोकसम्म रहेको फोरलेन सडकको बीचको डिभाइडरमा राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले आआप्mना झन्डा झुन्डयाएका थिए । यसैगरी गण्डकदेखि भन्सारसम्मको विद्युत् तथा टेलिफोन पोलमा झुन्डयाइएको झन्डा, प्mलेक्स लगायत प्रचार सामग्री प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र म्यादी प्रहरीले आज निकालेका छन् । वीरगंज, मेनरोडको डिभाइडर, विद्युत् पोल तथा टेलिफोन पोलमा नेकाले झन्डा, प्mलेक्स ब्यानरहरू झुन्डयाएको थियो । त्यसपछि सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाललगायत दलहरूले झुन्ड्याउन शुरु गरे । झन्डाको विषयलाई लिएर फोरम र नेकाबीच रस्साकस्सी पनि भएको थियो । फोरमका कार्यकर्ताले नेकाको झन्डा हटाएर आप्mनो झन्डा झुन्ड्याएको भन्दै दुवै पार्टीबीच आरोप–प्रत्यारोप भएको थियो । नेकाले पत्रकार सम्मेलन गरी फोरमले झन्डा हटाएको आरोप लगाउँदै स्थानीय प्रशासन र निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी पनि गरेको थियो । फोरमले
२०७४ मङ्सिर १२ गते मङ्गलवारको प्रतीक दैनिक
२०७४ मङ्सिर ११ गते सोमवारको प्रतीक दैनिक
वीरगंजमा चन्दा आतङ्क ः व्यापारीहरू बेपत्ता
प्रस, परवानीपुर, ११ मङ्सिर/ दोस्रो चरणको निर्वाचनमा बढदै गएको चन्दा आतङ्कको कारण वीरगंजका व्यवसायीहरूमा त्रास पैmलिएको छ । विभिन्न पार्टीले चन्दा भन्दै लाखौ रकम माग गरेपछि वीरगंजका व्यापारीहरू मोबाइल अफ गरेका छन् भने कति वीरगंज बाहिर बिदा मनाउन पुगेका छन् । पर्सामा एउटा पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चारजना, प्रदेशसभा सदस्यमा ८ जना गरी १२ जना उम्मेदवार छन् । तर एउटा पार्टीबाट कम्तीमा दुई दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिले लेटरप्याडमा आर्थिक सहयोग माग गर्दै विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा पत्राचार गरेको व्यवसायीहरूले बताए । “एउटै पार्टीका दर्जनौं नेताहरू पैसा माग्न आइरहेका छन्, नदिएपछि फोनमा जथाभावी गाली गर्छन्”– नाम नबताउने शर्तमा एकजना व्यापारीले भने– “पैसा लिन मात्रै नेताहरू आउँछन्, अरू बेला हाम्रो सुखदुःख सोध्न फर्केर आउँदैनन् ।” चुनावको बेला चन्दा आतङ्क रोक्न राजनीतिक दलका जिल्लास्तरीय नेताहरूले पहल गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ । व्यक्तिपिच्छे माग गरिने चन्दा रोक्न बास्केट सिस्टम लागू गर्नुपर्ने वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घले बताएको छ । एउटै व्यापारी घरानाबाट एउटा चुनावको ल
संवेदनशील मतदान केन्द्रको अनुगमन
प्रस, परवानीपुर, ११ मङ्सिर/ सुरक्ष्Fा समिति, पर्साले आसन्न मङ्सिर २१ को निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर पर्साको मतदान स्थलहरूको अनुगमन निरीक्ष्Fण शुरु गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहको नेतृत्वमा आज पर्सा क्ष्Fेत्र नं. ३ का विभिन्न मतदान स्थलहरूको अनुगमन निरीक्ष्Fण भएको थियो । पर्साका १६७ मतदानस्थलमध्ये १५ वटा सामान्य, ७६ वटा संवेदनशील र ७६ वटा अतिसंवेदनशील रहेकोले निर्वाचनभन्दा एक हप्ता अगाडि सुरक्ष्Fा प्रबन्ध चुस्तदुरुस्त बनाउन अनुगमन, निरीक्ष्Fणमा जोड दिएको उनले बताए । प्रजिअ सिंहसँग पर्सा प्रहरी उपरीक्ष्Fक डा. गणेश रेग्मी, सशस्त्र प्रउ शान्तिकुमार कार्की, अनुसन्धानका एसपीलगायत टोलीले ३ नं. क्षेत्रको धोरे, पकाहा मैनपुर, परसौनीभाठा, पोखरिया, पटेर्वा सुगौलीलगायत क्षेत्रमा मतदान स्थलको अनुगमन गरेको छ । विशेषगरी भारतीय सीमासँग जोडिएका अतिसंवेदनशील मतदानस्थलमा सुरक्ष्Fा प्रबन्ध कडा पारिएको उनले बताए । मङ्सिर १८ देखि निर्वाचन कार्यक्रममा नियुक्त कर्मचारीहरू मतदानस्थल पुग्ने र मङ्सिर १९ देखि मतदाता परिचयपत्रलगायत अन्य बन्दोबस्तीको काम शुरु गरिएको छ । जसलाई
प्रथम वीरगंज च्याम्पियनसिपको तेस्रो दिन जलेश्वर विजयी
प्रस, वीरगंज, ११ मङ्सिर/ वीरगंज नारायणी रङ्गशालामा सञ्चालित प्रथम च्याम्पियनसीप क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आज तेस्रंो दिनको खेलमा जलेश्वर विजयी भएको छ । पहिलो ब्याटिङ्ग गरेको जलेश्वरले ९ विकेटको नोक्सानीमा ७० रन बनाएको थियो । प्रतिउत्तरमा मोतिहारी सबै विकेट गुमाएर २०.१ ओभरमा ५४ रनमैं सीमित रह्यो । आजको खेलको म्याद अफ द म्याच राहुलप्रताप सिंह भए ।
अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव मङ्सिर १० गतेमा पहिलो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव भएको छ । जसमा ३२ जिल्लाको ३७ सिट प्रतिनिधिसभा र ७४ सिटको प्रदेशसभाको लागि चुनाव भयो । प्रतिनिधिसभाको कुल १६५ सिटमध्ये ३७ सिटबाहेक र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ ३३० मध्ये ७४ सिटबाहेक सदस्यका लागि मङ्सिर २१ गते चुनाव हुँदैछ । यी दुवै चुनाव अहिलेको सन्दर्भमा निकै महŒवपूर्ण छ । अहिले निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिको काँधमा संविधान कार्यान्वयन मात्र होइन, गणतन्त्र तथा सङ्घीयता कार्यान्वयन र मुलुकको समृद्धि तथा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने दायित्व पनि छ । चुनाव सम्पन्न नहुँदै दुई खाले चुनौती देखा परेको छ । जसमा पहिलो हो–मधेसको सवालको समाधान र दोस्रो–सशस्त्र विरोधको अन्त्य । चुनाव बहिष्कार गरी बम विस्फोट गराउने, गाडी जलाउने, बन्दुकको दम्भ देखाउने कार्यले सशस्त्र द्वन्द्वको बीजारोपण भइसकेको छ । जुन सशस्त्र द्वन्द्वबाट आम जनता आजित भइसकेकोले अब उप्रान्त यस्तो दुःख झेल्न नपरोस् भन्ने आम चाहना छ । यसलाई फेरि बल प्रयोग गरेर होइन, शान्तिपूर्ण तरिकाबाट नै समाधान गर्नुपर्छ । मुलुकभित्र असन्तुष्ट पक्ष नरहने क
काग कराउँदै छ...
देशले सबैभन्दा बढी संवेदनशील भएर ध्यान पु¥याएको क्षेत्र शिक्ष्Fा हो । शिक्षा क्षेत्रको उन्नतिका लागि यहाँ जति प्रयोग भए, जति लगानी भए, जति विश्व समुदायले सहयोग ग¥यो सबै बालुवामा पानी खन्याए सरह भएको छ । कारण शिक्ष्Fाको नारा निकै लगाइयो, लगानी पनि बेस्सरी गरियो, तर उपलब्धि प्राप्त गर्ने चेष्टा गरिएन । एउटा आमाबाबुले आप्mनो सन्तानको सुख सुविधाका लागि सबै स्रोत साधन त जुटाइदियो तर उसको हेरचाह ढङ्गले गरेन भने उपलब्धि शून्य भएजस्तै भएको छ नेपालको शिक्ष्Fा क्षेत्र । देश र नेपाली जनताको दुर्भाग्य नै होला, शासकहरूले कहिले पनि जनपक्षको कामलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । कुरा शिक्षा क्षेत्रको मात्र होइन, सबै क्ष्Fेत्रमा–एउटा लहड चल्छ, तमाम राष्ट्रिय शक्ति त्यता ओइ¥याइन्छ तर अनुगमन, रेखदेख र उपलब्धिमा ध्यान पु¥याइँदैन । जसले, गर्ने जनता नै त्यस क्षेत्रबाट निराश हुन पुग्दछ । एकताका कृषिमा निकै गरियो, सबभन्दा बढी बजेट प्रवाह गरियो, आज किसान यति हतोत्साहित छ कि कृषि कर्मबाट मुक्त हुँदै गएको छ । देशमा विकासको पूर्वाधारको रूपमा रहेको शिक्षा, सडक, ऊर्जा, कृषि, उद्योग आदिमा अहिलेसम्म जति लगानी भएको
बाराका ४ प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि १२ जनाबीच प्रतिस्पर्धा, ककसले दाउ मार्ने हो प्रतीक्षाको विषय
गम्भीरा सहनी, जीतपुर, १० मङ्सिर/ दोस्रो चरण अन्तर्गत मङ्सिर २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा सहभागी उम्मेदवारहरू आआप्mनै ढङ्गले मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्न सक्रिय छन् । मतदाता भने उम्मेदवारहरूमध्ये विगतमा सत्ता तथा सत्ताको विपक्ष्Fमा भएको बेला बारावासीका लागि केके काम गरे मूल्याङ्कन गर्न लागेका छन् । क्षेत्र नम्बर १ अन्युत मैनाली वाम गठबन्धनबाट बारा क्ष्Fेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार अच्युत मैनालीको जन्म २०२२ साल असार काभ्रेको कटुञ्जे गाविसमा भएको हो । बसाइँ सरेर बारा पुगेका मैनालीले त्रिजुद्ध मावि वीरगंजबाट एसएलसीसम्म अध्ययन गरे । नेपाल ल क्याम्पस काठमाडौंबाट बिएल र ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस वीरगंजबाट राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । २०३७ सालमा वाम विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीति थालेका अच्युत मैनाली लामो समय एमालेको पूर्णकालीन कार्यकर्ता भए पनि एमालेको माथिल्लो पदमा पुगेका छैनन् । उनी अहिले एमालेको केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का सदस्य हुन् । उमाकान्त चौधरी वनस्पतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण नेपाली काङ्ग्रेसका नेता उमाकान्त चौधरीको जन्म वि.सं
शिक्षक दरबन्दीबिना १० वर्षदेखि सञ्चालनमा दलित विद्यालय
प्रस, पोखरिया, १० मङ्सिर/ पर्सा जिल्लाको सुर्जाहामा रहेको नेपाल दलित मुक्ति प्राविमा दुई वर्षदेखि एकजना शिक्ष्Fकले मात्रै तीनवटा कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । २०६४ सालमा स्थापित सो प्राविमा अहिलेसम्म एकजना शिक्ष्Fकको पनि दरबन्दी छैन । १० वर्षदेखि विद्यालयमा अध्यापन गराउँदै आएका हरिकिशोर दास एक्लैले अहिले दुई वर्षदेखि कक्षा १ देखि ३ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराउँदै आएका छन् । उनको पनि अहिलेसम्म दरबन्दी छैन । उनीसँगै यस अघि सो विद्यालयमा चारजना शिक्ष्Fक थिए । दुई वर्ष पहिलेसम्म गाविसले जनही रु ३ हजार शिक्ष्Fकहरूलाई तलब दिएर अध्यापन गराउँदै आएको थियो । तीनवटा कक्ष्Fामा चारजना शिक्ष्Fक हुँदा विद्यालयमा ७० जना दलित विद्यार्थी अध्ययन गर्दथे । दुई वर्ष अघि गाविसले रु ३ हजारभन्दा बढी तलब दिन नसकेपछि तीनजना शिक्षक विद्यालय छाडेर गएका हुन् । उनीहरूको विकल्पमा अहिलेसम्म कुनै शिक्ष्Fक छैन । शिक्ष्Fकहरू हटेपछि विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि पातलिएको छ । अहिले तीनवटा कक्ष्Fामा दैनिक १० भन्दा बढी विद्यार्थी आउँदैनन् । उनीहरूलाई एउटै कक्ष्Fामा राखेर दास पढाउने गर्छन् ।
‘लक्ष्य’ बेगर सफलता सम्भव छैन
अनन्तकुमार लाल दास के तपाईंलाई थाहा छ, तपाईं कता गई राख्नुभएको छ ? धेरैजसो विद्यार्थीहरूलाई यस प्रश्नको जवाफ थाहा नै हुँदैन । कसैले भन्छ–अर्को कक्षामा प्रवेश गर्न त कसैले डाक्टर वा इन्जिनियर बन्न । किनभने कसैले पनि आपूmलाई अशिक्षित भनाउन रुचाउँदैन । यसले के प्रमाणित गर्दछ भने उनीहरू विद्यालय र क्याम्पस गएका छन् भन्ने उद्देश्यका लागि सर्टिफिकेट र डिग्री प्राप्त गरिरहेका छन् तर लक्ष्यप्रति बेखबर छन् । मेरो दृष्टिमा यिनीहरू त्यस्ता पूmटबल खेलाडी हुन् जो एक छेउबाट अर्को छेउसम्म बल प्mयाँकिरहेका छन् तर गोल गरिरहेका छैनन् । धेरैजसो विद्यार्थी आज बलसँगसँगै कुदिरहेका त छन् तर उनीहरूलाई एउटा गोल पनि प्राप्त हुँदैन, किनभने उनीहरूसँग कुनै लक्ष्य नै हुँदैन । जसरी भोको मानिसले भोजन र तिर्खा लागेकोले पानी खोज्दछ, त्यसैगरी कुनै पनि कार्य गर्न हामी त्यस बेला उत्प्रेरित हुन्छौं जब हामीसँग त्यो नभएको कुरा थाहा पाउँछौं । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने इच्छा जागृत भएपछि मात्र त्यसको पूर्तिका लागि हामी प्रयत्न गर्दछौं । केही व्यक्तिहरूले यो इच्छा नै लक्ष्य हो पनि भन्ने गरेका छन् तर इच्छा र लक्ष्यमा धे